အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ် ကလင်တန် ဦးဆောင်တဲ့ CGI ရဲ့ ဒီနှစ် ညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်ကနေ အင်တာနက် Skype ဗီဒီယိုက တဆင့် မိန့်ခွန်း တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
တကယ်လို့ မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာက ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ကမ္ဘာက လေ့လာသိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို သိရှိနေနိုင်ဖို့ သတင်းစာထဲပါတာလောက် ဖတ်ယုံမဟုတ်ဘဲ အဖြစ်အပျက်တွေ နောက်ကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် လိုက်ပြီး ကြည့်နေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ၊ တရုတ်တို့ကို ရည်ညွှန်း ပြောကြားရာမှာတော့ အစိုးရချင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ဖိ်ု့ထက် ပြည်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုပြီး အလေးထားဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကိုနားထောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
၃-ရက်ကြာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီ CGI ညီလာခံကို ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးလောက ခေါင်းဆောင်တွေ အပြင် နိုင်ငံ ၅၀ ကျော်က အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်ကြပါတယ်။
ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို အာအက်ဖ်အေ အဖွဲ့သား မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
some Myanmar people were happy to hear that International Democracy Day was celebrated at Parliament Hall on 15th sept;11.all political parties were invited to attend this ceremony.it isalegal announcement for democracy in Myanmar.that meant Myanmar new government start new beginning for human rights and democracy.nowafew day later only,U Kyaw San,minister for news and information , said 'there will be no allowance to organize the unions of workers,union for students and union for farmers.his speech meant the opposite direction of democracy and it may make ugly the image and activity of changes in Myanmar.so he should take responsibility for his speech.he only has no authority to talk it.
I like so much our mother Aunty Su.
Sep 22, 2011 06:43 AM